iga ucid ayaa ka hadlay xadhig ay xukuumadu kula kacday gudoomiyaha xisbiga ee gobolka saaxil iyo xubno kale isagoo talaaboooyinka qalafsan ee ay xukuumadu ku kacayso iyo dadka bilaa ujeeada lays kaga xidhayo. Sidoo kale gudoomiye faysal ayaa sheegay in cadowga Somaliland shalay ku mashquulsanaayeen dugsiga abaarso hadana ay ku mashquulsan yihiin arinta laascanood HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA WARKAN; | Gabiley News Online
iga ucid ayaa ka hadlay xadhig ay xukuumadu kula kacday gudoomiyaha xisbiga ee gobolka saaxil iyo xubno kale isagoo talaaboooyinka qalafsan ee ay xukuumadu ku kacayso iyo dadka bilaa ujeeada lays kaga xidhayo. Sidoo kale gudoomiye faysal ayaa sheegay in cadowga Somaliland shalay ku mashquulsanaayeen dugsiga abaarso hadana ay ku mashquulsan yihiin arinta laascanood HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA WARKAN;
October 9, 2021 - Written by admin
iga ucid ayaa ka hadlay xadhig ay xukuumadu kula kacday gudoomiyaha xisbiga ee gobolka saaxil iyo xubno kale isagoo talaaboooyinka qalafsan ee ay xukuumadu ku kacayso iyo dadka bilaa ujeeada lays kaga xidhayo.
Sidoo kale gudoomiye faysal ayaa sheegay in cadowga Somaliland shalay ku mashquulsanaayeen dugsiga abaarso hadana ay ku mashquulsan yihiin arinta laascanood